Ubuntu 19.10 Eoan Ermine beta ikozvino inowanikwa kurodha pasi | Linux Vakapindwa muropa
Iye zvino yave kuwanikwa yekutanga beta yeUbuntu 19.10 uye ayo epamutemo zvinwiwa
Ivo havana chavakaita pazuva rakarongwa, zvirinani munguva yeSpanish, asi hazvichisina basa: Canonical yagadzira iyo Ubuntu 19.10 yekutanga beta Eoan Ermine. Kurudziro iyi yanga yakarongerwa nezuro, Gunyana 26, uye yaifanirwa kunge yakasvika masikati, asi yatosvika mambakwedza nhasi. Mumiriri we beta aivapo kubva Chitatu chapfuura.
Panguva ino Ubuntu Budgie haasati ari wekutanga kumuka kuva wekutanga kuburitsa nhau sezvazvaive mune zvakaburitswa zvakapfuura kana naye kuvhurwa kwekutanga beta beta de eoan ermine. Kana Ubuntu / Canonical haina kana, uyo anongosheedzera kuburitswa kana zvese zvave munzvimbo. Uye ndezvekuti kana Kubuntu yaburitsa tweet yake ichitaura nezvekuwanikwa kweiyo KDE vhezheni yeUbuntu, zvaive zviripo se "Ubuntu" yaive ichiri iyo "Server" vhezheni.
Iyo yakagadzika vhezheni yeUbuntu 19.10 inosvika muna Gumiguru 17
Iyi beta yatogadzirisa kare matambudziko ese angadzivise kuitiswa chaiko kweiyo sisitimu yekushandisa, mairi inosanganisirwa kuti iyo installer inoshanda sezvanga zvichitarisirwa. Asi, kana yaiswa, isu tinofanirwa kuziva kuti isu tiri kutarisana nehurongwa hwekushanda iyo yakagadzika vhezheni ichaburitswa mumavhiki mashoma, muna Gumiguru 17 kuti inyatsoita.
Kana zviri izvo izvo Eoan Ermine brand ichasanganisira mune zvakawandisa, inonyanya kuzivikanwa ruzivo ndiyo kernel Linux 5.3 iyo inosanganisira akawanda maficha maficha, mazhinji acho ane chekuita nerutsigiro rwehardware. Kune rimwe divi, zvese zvinonaka zvinosanganisira mavhezheni matsva enzvimbo dzakajeka uye mapakeji akagadziridzwa ezvezvinhu zvakadai sekushandisa. Iyo graphical nharaunda iyo Ubuntu ichazoshandisa ndeye GNOME 3.34 (iyo beta inosanganisira GNOME 3.33.91, inova yechipiri beta yeGNOME 3.34), nepo imwe vara rakakurumbira senge Kubuntu rinoshandisa Plasma 5.16.
Unogona kudhawunirodha iyo Eoan Ermine betas kubva pane izvi zvinongedzo:Ubuntu, Kubuntu, Lubuntu, Xubuntu, Ubuntu MATE, Ubuntu Studio, Ubuntu Budgie y Ubuntu Kylin.
Ubuntu 19.10 ine ZFS tsigiro yemidzi senzira yekuyedza mune yayo inosimudza
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Iye zvino yave kuwanikwa yekutanga beta yeUbuntu 19.10 uye ayo epamutemo zvinwiwa
Mushure memakore manomwe, bazi idzva reZeek 3.0.0 traffic analyzer rakazoburitswa.
SUSE inowedzera kuendesa uye kugoverwa kwecontactized uye gore -zvizvarwa zvekushandisa